Amin'ny maha-turnkey asa fivoriambe PCB mpamatsy, dia manohana ny PCB fanamboarana sy ny fivoriana miaraka amin'ny faritra iray eny ifotony ao amin'ny fijanonana. Mampiasa toe-of-the-kanto fitaovana azo antoka mba hamokatra sy hanolotra PCBs faritra ambany vidiny eny ifotony, nandroso milina ho an'ny birao fivoriambe. Ny faritra PCB manampahaizana filana ekipa afaka handahatra ny faritra azo antoka avy amin'ny loharanom-baovao isan-karazany, na ao an-toerana sy ny oversea.
KingSong Faritra kosa dia manome feno-key sy ny ampahany kosa-key PCB tolotra fivoriambe . Full fivoriambe turnkey fanompoana, isika dia manohana dia ahitana dingana rehetra PCB orinasa mpamokatra entana, faritra manampahaizana filana sy ny fivoriana. Ary ny ampahany manan-danja kosa-fanompoana, afaka misafidy ny manome sasany tianao, dia hanohana ny fifandanjana ary manao PCBA fivoriana ho anareo.
Fivoriambe PCB Capabilities
SMT fiangonana sy lavaka alalan'ny fivoriana
Mpitovo na misy rindrina roa samy hafa firenena PCB fivoriana
Low ny fivorian'ny biraom-boky afovoany fanohanana
In-faritra fitiliana (TIC), Functional fizahan-toetra, IC fandaharana
Quick-PCBA indray prototypes
Hifantina Wave Solder sy Conformal coating
Box manaova fivoriambe sy Cable fiangonana
Fivoriambe PCB Quote
Fa mila anao izahay notsongaina mampahafantatra antsika ny zavatra ilainao dia turnkey PCB PCB fanompoana amin'ny fanamboarana, singa fividianana, fiangonana, PCB Stencil, Functional fitsapana na ny sasany amin'izy ireo.
Gerber amin'ny spec. fa niteraka PCB fanamboarana
Bom amin'ny faritra tsirairay famaritana sy ny tsipiriany
SMD sary sy ny toerana & naka antontan-taratasy raha ilaina
Fa na inona na inona tokony mpanampy, Aza misalasala mandefa ny mailaka any sales@king-pcb.com . Ny varotra dia miverina aminao raha vao.
Yongzheng Building, Fuyong, Shenzhen 518103 Shina